गुगल अकाउन्ट भरिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस् खाली गर्न -3ghumti
गुगल अकाउन्ट भरिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ?...
गुगल अकाउन्ट भरिएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यसो गर्नुहोस् खाली गर्न
बैशाख २५, २०७९ आइतवार २१:११ बजे
काठमाडौँ l गुगलले १५ जीबीसम्म निःशुल्क क्लाउड स्टाेरेजकाे सुविधा दिने गरेकाे छ । यस्ताे स्टोरेज सेवा जीमेल, गुगल फोटो, गुगल ड्राइभ लगायतका लागि प्रयाेग गर्न सकिन्छ ।
नियमित रूपमा चलाउने गुगल अकाउन्टमा स्टाेरेज फुल हुनु स्वभाविक नै हाे । अर्थात् अधिकांश प्रयाेगकर्ताले १५ जीबीको सीमित डेटा स्टोरेज पुरा गरिसकेका छन् ।
यसपछि स्टाेराेज खाली गर्ने वा थप स्पेस खरिद गर्ने विकल्प उनीहरूसामु छ । आज हामी भरिएकाे गुगल र जिमेल अकाउन्टको स्टोरेजलाई खाली बनाउने तरिका सिकाउँदै छाैं :
आफ्नो गुगल अकाउन्टको स्टोरेजलाई खाली गर्नुअघि स्टोरेज कसरी प्रयोग भइरहेको त्यो कुराको ओभरभ्यू (अवलोकन) गर्नुहोस् । कहिलेकाहिँ धेरै वर्षअघि अपलोड गरेका ठूला फाइल र गुगल फोटोजमा अपलोड गरेको फाेटाेले पनि ती स्टोरेजमा ठाउँ ओगटेको हुनसक्छ ।
साथै तपाईंले ‘larger:10mb’ सर्च गरेर भारी तथा ठूला ईमेलहरु पनि हटाउन सक्नुहुन्छ । भारी ईमेलहरु खोजेर डिलिट गर्ने यो छिटो र सजिलो तरिका हो ।
५. ट्र्यास खाली गर्नुहोस्
यदि तपाईंले गुगल ब्याकअप वा सिङ्क प्रयोग गरी आफ्नो गुगल ड्राइभमा फाइल ब्याकअप गर्नुहुन्छ भने यस्तो बानी रोक्नुहोस् । तपाईंले यसको सट्टा ड्रपबक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ ।
ब्याकअपका लागि तपाईंले अर्को जिमेल पनि खोल्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंको पीसीमा धेरै ठूला फाइलहरु छन् भने यसले तपाईंको प्रमुख गुगल अकाउन्टमा धेरै ठाउँ नलिएको ठीक हुन्छ ।
यदि माथिका सबै विधिबाट पनि तपाईको स्टोरेज खाली हुन सकेन भने गुगल वान प्रयोग गरी एडिसनल स्टोरेज खरिद गर्नुहोस् । यसको मूल्य पनि निकै कम छ । गुगलले तपाईंलाई १०० जीबी स्टोरेजका लागि प्रतिमहिना १.९९ डलर चार्ज गर्दछ ।
# गुगल अकाउन्ट